Actionball in Zulu
Loluhlelo luyisiza nganni ingane yakho?
I ActionBall: uhlelo olwenza izinguquko ezine mpilo ekukhuleni kwangane ukunyakaza kwemisipha. Lwakha injabulo nokufuna ukudlala. Othisha no Dokotela benqondo bayakukhuthaza ukudlalwa kwe ActionBall ngoba idlala indima enkulu ekukhuleni kwengane.
I ActionBall inhlangano eyasungulwa ngonyaka - 1993 iwuhlelo iwentuhuko e khula ngokukhulu ukushesha.
Izingane zanamuhla sezichitha isikhati esincane sokudlala emnyango kuthi, isikhathi esiningi zisicihitha ngokubuka omabona kude nama. Compuytha ezinye zalezizinto Bayasizakala kantifuthi ziphinde zibaphazamise ekuhlanganeni nezinye izingane nokuswabuluka komzimba nezinguquko zawo.
I ActionBall isebezisa amathuluzi alula alungele ukudlala izingane ngokwezinga lazo izingane ziba nomfutho, zilolongeke.
I Actionball yenzelwe ukuvelisa lokhu:
Imisipha emzimneni wonke
Nokuhlalisana nezinye izingane
Izingane ezijoyine I ActionBall.
Zibanomehluko ngokuhulu ukushesha.
Othisha Be ActionBall banolwazi nesipiliyoni abaqeqeshelwesona kanye nosizo lokuqala.
Izifundo ze ActionBall zenzelwa esikoleni lapho kufunda khona ingane yakho kanye ngesonto kuthatha ihora no hhafu kuhambisananokusebenza kwezikole zikahulumeni.
Ukhokha izinyanga ezilishumi enyakeni kusukela kusukek nhlolanja noma, ukhokha negekota izigaba ezine njalo uma kuvulwa izikole. Khetha indlela ongawazi kholkhangayo. Ngingathanda ukukhokha kanje.
R100 to ngenyanga: izinyanga ezilishumi kuphela
R250 ngekota: amakota amane
R900 kanye ngonyaka - uthola isiphulelo sika 10% kumapesent alishumi.
I ActionBall Ayikwzi ukungaziqhenya ngokuba semqoka kwalomdlalo owakhayo. Emuva kwaleso naleso sifundo ingane ithola ukunconywa bese ekupheleni kwekota. Sikhipha umbiko ochaza impumelelo neqhaza ekuzimiseleni kwengane noshintsho empilweni yaya. Ekupheleni konyaka izigane zithola izitifikethi nendondo ukubonga ukuzibandakanya kwi ActionBall.